Galanthamine - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Galanthamine
Galantamine ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Galantamine ကို Alzheimer’s ရောဂါနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ မပြင်းထန်တဲ့ dementia ရောဂါအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူဟာ Alzheimer’s ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေခြင်း မရှိပေမယ့် မှတ်ဉာဏ်၊ သိမှတ်မှုနဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တိုးတက်မှုရှိစေဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ neurodegenerative drugs တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ acetylcholinesterase inhibitors အနွယ်ဝင် ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဦးနှောက်အတွင်းမှာ acetylcholine လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတစ်မျိုးကို ပြန်လည်ထိန်းညှိပေးပြီး မှတ်ဉာဏ်နဲ့ အတွေးတွေကို ကောင်းမွန်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Galantamine ကို ဆေးပညာ လမ်းညွှန်စာအုပ်များမှာ ဖေါ်ပြခြင်းမရှိတဲ့ အကြောင်းအရာများအတွက်လဲ အသုံးပြုခြင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
Galantamine ကို သင့်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏကို အတိအကျသိရှိရန် ဆေးပေါ်ရှိ အညွှန်းကို သေချာ ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးကို အစာစားပြီးသောက်သင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ် မနက်စာနဲ့ ညစာစားအပြီး သောက်သင့်ပါတယ် (သို့) ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သင့်ပါတယ်။ အခြားညွှန်ကြားမှု မရှိမချင်းမှာ ဒီဆေးကို ရေအမြောက်အမြားနဲ့ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေ ရရှိမှု နည်းစေဖို့ သင်လိုအပ်တဲ့ပမာဏရောက်အောင် တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ပြီး သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ကုသမှုကို တုန့်ပြန်ပုံပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒီဆေးကို တစ်နေ့ ၂၄ mg ထက်ပိုပြီး မသောက်သင့်ပါဘူး။
ဒီဆေးကို အရည်ပုံစံနဲ့ သောက်နေတယ်ဆိုရင် ပုလင်းပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ပမာဏကို တိုင်းတာဖို့ ဆေးဘူးမှာ ပါတဲ့ကိရိယာကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏကို non-alcoholic beverage လေးအောင်စနဲ့ရောမွှေပြီး အရည်ကို သောက်သင့်ပါတယ်။ နားမလည်ရင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
သုံးရက်ထက်ပိုပြီး galantamine သောက်တာ ရပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က ဒီဆေးကို ပမာဏ အနည်းငယ်က ပြန်ပြီး စတင်သုံးစွဲစေကာ တဖြည်းဖြည်း ဆိုးကျိုးတွေ နည်းစေဖို့ တိုးပေးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးကို အကောင်းဆုံးအာနိသင်ရရှိဖို့ ပုံမှန်သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ဆေးသောက်တာ မရပ်သင့်ပဲ သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆေးပမာဏ တိုးသောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးရဲ့ အာနိသင်အစွမ်းကုန်မပြခင် အနည်းဆုံး လေးပတ်လောက် အချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
သင့်အခြေအနေ ပိုဆိုးလာရင် ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
Galantamine ကိုအသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Galantamine နဲ့ ဓါတ်တည့်ရင် (သို့) အခြားဆေးတွေ၊ galantamine ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ဆေးရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ အကြောင်းမေးထားသင့်ပါတယ်။
အခြားဆေးတွေ သောက်နေတယ်ဆိုရင်။ တိုင်းရင်းဆေးနဲ့ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် ပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ သောက်နေတဲ့ (သို့) သောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆေးအကုန်ကို ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆေးတွေ သောက်နေရင်တော့ သတိထားပြီးပြောပြသင့်ပါတယ်။
ambenonium chloride (Mytelase); amitriptyline (Elavil); anticholinergic medications such as atropine (Atropen, Sal-Tropine), belladonna (in Donnatal, Bellamine, Bel-Tabs, others); benztropine (Cogentin), biperiden (Akineton); clidinium (in Librax), dicyclomine (Bentyl), glycopyrrolate (Robinul), hyoscyamine (Cytospaz-M, Levbid, Levsin), ipratropium (Atrovent, in Combivent), oxybutynin (Ditropan), procyclidine (Kemadrin), propantheline (Pro-Banthine), scopolamine (Scopace, Transderm-Scop), tiotropium (Spiriva), tolterodine (Detrol), and trihexyphenidyl; certain antifungals such as fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), and voriconazole (Vfend); aspirin or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen (Advil, Motrin) and naproxen (Aleve, Naprosyn); bethanechol (Urecholine);cevimeline (Evoxac); cimetidine (Tagamet); clarithromycin (Biaxin, in Prevpac); digoxin (Lanoxin); fluoxetine (Prozac, Sarafem); fluvoxamine (Luvox); heart medications; nefazodone; neostigmine (Prostigmin);other medications for Alzheimer’s disease; medications for human immunodeficiency virus (HIV) or acquired immunodeficiency syndrome (AIDS); medications for high blood pressure; paroxetine (Paxil); pyridostigmine (Mestinon); and quinidine (Quinidex). ဆရာဝန်က ဆိုးကျိုးတွေကို ထိန်းချုပ်ဖု့ိ ဆေးပမာဏတွေကို ညှိနှိုင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနဲ့ အခြားအဆုတ်ရောဂါ၊ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း၊ အနာဖြစ်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းရောဂါတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် (သို့) ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိရင် (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ galantamine သောက်နေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရှိသွားရင်လည်း ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် (သွားခွဲစိတ်မှု အပါအဝင်) သင်ဆေးသောက်နေတယ်ဆိုတာကို ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ သွားဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
Galantamine ဟာ သင့်ကို အိပ်ငိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးသောက်ထားရင် ဒီဆေးဟာ ဘယ်လိုအာနိသင်ရှိမရှိဆိုတာ မသိမချင်း ကားမောင်းခြင်း (သို့) စက်ကိရိယာတွေ အသုံးပြုခြင်းတွေ မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
အရက်ဟာ ဒီဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အိပ်ငိုက်ခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
Galantamineကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဓါတ်မတည့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ရင် အရေးပေါ်ဆေးကုမှု ယူသင့်ပါတယ်။ အနီကွက်ထခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း အစရှိသည်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်း။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ပြင်းထန် လက္ခဏာ တစ်ခုခု ဖြစ်ခဲ့ရင် Galantamine သောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ နှလုံးခုန် နှေးခြင်း
ဆီး (သို့) ဝမ်းအတွင်း သွေးပါခြင်း
သွေးအန်ခြင်း (သို့) ကော်ဖီမှုန့် နဲ့ တူတာတွေ အန်ခြင်း
နာကျင်ခြင်း (သို့) ဆီးသွားရ ခက်ခဲခြင်း
ပုံမှန်ထက်နည်းသော (သို့) လုံးဝ ဆီးမသွားခြင်း
အားနည်းခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ ချွေးထွက်နည်းခြင်း၊ ရေဆာခြင်း၊ အသားပူခြောက်ခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ဝမ်းမည်းမည်းသွားခြင်း၊ အသားအရောင် (သို့) မျက်လုံးဝါခြင်း
ပင်ပန်းခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း၊ နှာရည်ကျခြင်း။
ပါးစပ်အတွင်း မသာယာသော (သို့) ပုံမှန်မဟုတ်သော အရသာ ရှိခြင်း
ယေဘူယျအသိပေးချက် – ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Galantamine နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
ယေဘူယျအသိပေးချက် – Galantamine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆေးတွေကို အသုံးပြုနေရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
• erythromycin (E.E.S., EryPed, Ery-Tab, Erythrocin, Pediazole);
• paroxetine (Paxil);
• rivastigmine (Exelon);
• atropine (Atreza, Sal-Tropine), belladonna (Donnatal, and others), benztropine (Cogentin), dimenhydrinate (Dramamine), methscopolamine (Pamine), or scopolamine (Transderm Scop);
• bladder or urinary medicines such as darifenacin (Enablex), flavoxate (Urispas), oxybutynin (Ditropan, Oxytrol), tolterodine (Detrol), or solifenacin (Vesicare);
• irritable bowel medicines such as dicyclomine (Bentyl), hyoscyamine (Hyomax), or propantheline (Pro-Banthine);
• NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) such as ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve, Naprosyn, Naprelan, Treximet), celecoxib (Celebrex), diclofenac (Arthrotec, Cambia, Cataflam, Voltaren, Flector Patch, Pennsaid, Solareze), indomethacin (Indocin), meloxicam (Mobic), and others; or
· ulcer medications such as glycopyrrolate (Robinul) or mepenzolate (Cantil).
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Galantamine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
ယေဘူယျအသိပေးချက် – Galantamine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Galantamine နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
ယေဘူယျအသိပေးချက် – Galantamine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ဖေါ်ပြပါ အခြေအနေတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။
· အစာအိမ် အနာ (သို့) သွေးထွက်ခြင်း
· ဆီးအိမ် ပိတ်ခြင်း
· နှလုံးခုန်နှုန်း ပြဿနာများ
· အလယ်အလတ် ကျောက်ကပ်ရောဂါ
· အလယ်အလတ် အသည်းရောဂါ
· ပြင်းထန် ကျောက်ကပ်ရောဂါ
· ပြင်းထန် အသည်းရောဂါ
Galantamine အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Galantamine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
လူကြီးများတွင် Alzheimer’s Disease အတွက် ဆေးပမာဏ
Immediate release ဆေးပြား (သို့) အရည်:
စစချင်းသောက်သုံးရင်:4mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် သောက်ရန်, မနက်နှင့်ညစာ စားအပြီး
ဆက်လက်သောက်ရန်: လေးပတ်သောက်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိရင် ဆေးကို 8mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် အထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပမာဏကို အနည်းဆုံးလေးပတ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီဆိုမှ တစ်နေ့ကို 12mg အထိ တိုးမြှုင့်သင့်ပါတယ်။
အများဆုံးပမာဏ – 16-24 mg/ day
Extended release ဆေးတောင့်
စစချင်းသောက်သုံးရင်: 8 mg နေ့စဉ် သောက်ရန်, မနက်စာအပြီး
ဆက်လက်သောက်ရန်: လေးပတ်သောက်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိရင် ဆေးကို 16mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ်အထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပမာဏကို အနည်းဆုံးလေးပတ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီဆိုမှ တစ်နေ့ကို 24mg အထိ တိုးမြှုင့်သင့်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Galantamine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
နှေးကွေးသော၊ မြန်သော၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော နှလုံးခုန်သံများ
ယေဘူယျအသိပေးချက် – Galantamine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Galantamine က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Galantamine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတောင့် extended release သောက်ရန် -24 Hour, Oral: 8 mg, 16 mg, 24 mg
အရည်၊ သောက်ရန် -4 mg/mL (100 mL)
သောက်ဆေး – :4mg, 8 mg, 12 mg
သူငယ်ပြန်နေတဲ့ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့ကို ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ကြမလဲ?